Midabka Toner-ka, Kartridge Copier Toner, Budada Koobiyeerka - ASC Toner
Waxaan ku jirnaa wershadaha, markaa uma baahnid inaad noqoto
Sida mid ka mid ah soo saaraha ugu weyn iyo iibiyaha ee alaabta xafiiska, ASC waxay dhistay R&D dhamaystiran iyo shaybaadhka tijaabada ah. Oo waxay leedahay koox xirfad leh R&D si ay u horumariyaan alaabta cusub.We si guul leh bilaabay noo gaar ah noocyada"ASC""语印""艾斯克" "Aisk" iwm. Sanadka 2019, farsamadayada cusub ee "Habka midabka dey iyo habkiisa" waxay ku guulaysteen codsigii shatiga ee xafiiska hantida aqooneed ee dawladda, waxayna ka dhigeen meel bannaan oo safkan ah.
Midabka Toner Powder
ghther kii ugu dambeeyay ee tayada sare leh iyo macluumaadka qalabka
Alaabta Shiinaha oo simbiriirixan leh oo tayo sare leh
Sida loo hubiyo waxqabadka xasilloon ee toner printer?
Marka lagu daro toner, waxaan u baahanahay inaan fiiro gaar ah u yeelano dhowr dhibcood.Marka hore, sanduuqa waa in aan la buuxin, haddii kale waxay saameyn doontaa awoodda daabacaadda ee daabacaha.Ka taxadar markaad daboolka ka bixinayso.Haddii aad ogaato inaan la furi karin, ha isticmaalin xoog si aad u...
Qiyaasta budada toner-ka ayaa waxyeello u leh kuwa caafimaadka qaba?
Daabacaadda toner khatar ma tahay?Qaybaha toner iyo toner laguma dhalaali karo jidhka bini'aadamka, wayna adagtahay in la soo saaro.Neefsashada muddada dheer ama neefsashada badan hal mar waxay si fudud u keeni kartaa cudurrada neef-mareenka, iyo toner waa xoogaa sun ah;Printer-ka waxa lagu hagaajiyaa dhalaalid...
Saamiga ka kooban toner-xawaaraha sareeyo ee loo isticmaalo nooc kasta waa ka duwan yahay.
Marka koobiyeyaashu sawiro asalka, iftiinka xoogga badan ee ay dhaliso laambada soo-gaadhista waxay dhaawacaysaa indhaha ilaa xad.Soo-gaadhista muddada-dheer ee iftiinkan xooggan wuxuu sababi doonaa luminta aragga.Waa in la hubiyaa in koobiyeeyaha la dhigo qol hawo fiican leh, oo ah...
Universal ricoh toner si loogu isticmaalo ricoh 3210d 62...
Canon universal toner si loogu isticmaalo canon ir2520 i...
Samsung ml 2161 tayo leh oo ku habboon prem
Sharp MX850 toner oo ku habboon isticmaalka fiiqan MX
baakad badan oo ku habboon hp 88a budada toner
HP285A china wax qabad heer sare ah warshad kartoonada...
ku habboon canon ir3300 ir3200 ir5000 universal...
Shiinuhu wax qabad sare oo toner cartridge cb436/43...
Xirmooyinka jumlada ah ee kg baakaynta bulk waxay kartaa
ASC sahayda hp 104a budada toner laser premium ...
iibka kyocera ee soo saaraha toner-ka ugu fiican
Daabacaha laser Shiinaha toner q5949x universal hp